Noraisin’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana moa ny taratasy fangatahana. Efa nahian’ny rehetra ny zava-miseho ankehitriny, hoy ny filohan’ny vovonana Antso fanavotam-pirenena na AFP, Faniry Razafimanantany, izay efa farim-peo mihitsy nitari-tolona sy nihogahoga teny an-toerana, ary efa nezahina nosorohina fa tsy nisy nihaino. Ankehitriny na ireo kandida nivavaka amin’ny CENI aza manompa azy. Ny hetsiky ny olom-pirenena sy ireo hery politika anio (TTF : omaly) dia fitakiana ny fanafoanana ny fifidianana, hoy hatrany izy. Raha mbola hikiry hanao fihodinana faharoa isika dia vao mainka zava-doza noho izao no hitranga. Izay no antony hoe « refonte » na fanadiovana tanteraka no atao. Hovoriana ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpitsara ary izay rehetra tompon’andraikitra amin’ny fifidianana dia adihevitra vaovao indray no hosokafana. Aleo mandamina zava-baovao ao anaty volana vitsivitsy toy izay manohy zavatra efa fantatra fa hiteraka korontana eto amin’ny firenena, hoy ny namaranan’ity mpanao politika ity ny teniny.